झन टाढा पुग्यो झनै ब्रम्हाण्ड विशाल भेटिएको छ । - Pradhanta
वैज्ञानिकहरुले ब्रम्हाण्डको नयाँ-नयाँ तथ्यहरुको पहिचान गरिरहेका छन् । अनेक तथ्यहरु पत्ता लगाई रहेका छन् । आखिर यो ब्रम्हाण्ड कहाँ गएर टुङ्गिन्छ अझै रहस्यको विषय छ । वैज्ञानिकरुले थप रहस्यको खोजी तीब्र रुपमा गरिरहेका छन् । झन टाढा पुग्यो झनै ब्रम्हाण्ड विशाल भेटिएको छ । एक तारबाट अर्को तारको दुरी लाखौ प्रकाश वर्ष हुने तथ्य पत्ता लागिसकेको छ । प्रकाशको गतिभन्दा तीब्र गतिका अन्तरिक्ष यान नबनाउने हो भने एउटा मान्छेको जीवनभर पनि अन्तरिक्षको एक छेउबाट अर्को छेउ पुग्न सकिँदैन ।
ब्रम्हाण्डको थप रहस्य खोज्न हालका प्रविधि अपर्याप्त भएको बैज्ञानिकहरुले बताई रहेका छन् । अन्तरिक्षमा मानव बस्तीको खोजी भइरहेको छ । मानव अनुकुलन वातावरण बनाउने सकिने पनि बैज्ञानिकहरुले बताई रहेका छन् । ब्रम्हाण्डबारे केही रोचक तथ्यहरु यस प्रकार छन् । १. अन्तरिक्षमा कुनै आवाज सुनिँदैन । यसको अर्थ अन्तरिक्ष शून्य छ । २. ब्रम्हाण्डको कुनै छेउ छैन । त्यसैले अन्तरिक्षको एक ठाउँबाट अर्कोतिर सीधा हिँड्यो भनेपनि अन्त्यमा पहिलेकै ठाउँमा पुगिन्छ ।
३. ब्रम्हाण्डमा प्रतिदिन २ सय ७५ मिलियन नयाँ तारा उत्पन्न हुन्छन् । हाम्रो ९० प्रतिशत शरीर ताराको तत्वबाट निर्माण हुन्छ । ४. यदि एक मिनेटमा सयको दरमा तारा गन्ने हो भने पूरै ब्रम्हाण्डमा रहेका सम्पूर्ण तारा गन्न दुई हजार वर्ष लाग्छ । ५. केही वैज्ञानिकहरुका अनुसार सन् २०३९ मा एउटा तारा पृथ्वीसँग ठोक्किनेछ । त्यसले पृथ्वीमा ठूलो क्षति पु¥याउने सम्भावना छ । ६. ब्रम्हाण्ड चारैतिरबाट जल, वायु, बादल र आकाशले घेरिएको छ । ७. पृथ्वीको गति हरेक सय वर्षमा १७ मिलिसेकेण्डका दरले घट्दै गइरहेको छ ।
चीनमा राजनीति गरेको समय र जेल जीवन बिताएका जस्ता विषय राजनीतिक क्षमताका मापक बन्दैनन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि चलेको अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धमा विश्व दुई कित्तामा विभक्त भयो ।
औद्योगिक क्रान्तिको इतिहासमा नेचुरल इन्टेलिजेन्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेनस् महत्वपूर्ण छ ।
मकवानपुरमा बढ्यो बलात्कारका घटना, तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन वर्षयता बलात्कारका घटनमा वृद्धि ।
शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच आधारभूत हिसाबले बाध्यात्मक मेल छ भने द्वन्दात्मक स्वार्थ पनि छ ।
आज ९०२ जना संक्रमित भए भने २,२८७ निको भए ।
खानेकुराको उपभोग सन्तुलन उमेर, मौसम, समय र शरीरको प्रकृति अनुसार फरक हुनु पर्छ ।